Wang Yi Meets with Zimbabwean Foreign Minister Frederick Musiiwa Makamure Shava
On November 28, 2021 local time, State Councilor and Foreign Minister Wang Yi met with Zimbabwean Foreign Minister Frederick Musiiwa Makamure Shava who is to attend the Eighth Ministerial Conference of the Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC) in Dakar.
Wang Yi said, China and Zimbabwe are good partners and good friends with a shared future. Under the strategic guidance of the two heads of state, China-Zimbabwe relations have been improving, fully demonstrating the positioning of a comprehensive strategic partnership. China thanks Zimbabwe's understanding of and support for its efforts to safeguard core interests. China never wavers in its support for Zimbabwe's endeavors to explore a development path that suits the national conditions of Zimbabwe, and is willing to continuously work with Zimbabwe to carry forward the tradition of friendship, strengthen the alignment of development strategies, fully tap the potential of mutually beneficial cooperation, increasingly expand pragmatic cooperation, and help Zimbabwe make greater progress in development.
Wang Yi said, Zimbabwe is a firm supporter for and participant of the FOCAC. Over the 20 years since the forum was launched, the fruits of China-Africa cooperation have spread across Africa and benefited hundreds of millions of African families. China will announce a series of new initiatives for pragmatic cooperation with Africa at the forthcoming conference, and expects the Zimbabwean side to play a positive role in making the forum a success.
Shava said, Zimbabwe admires China's tremendous development achievements, congratulates the Communist Party of China on its centenary, and hails China's pursuit of the path of peaceful development and its important role in reducing global poverty and promoting the overall development of developing countries. Zimbabwe appreciates China's support in helping the country achieve the economic transition. Zimbabwe pursues a policy of "looking east" and will continue to work with China to firmly support each other.
Noting that the smooth progress of the cooperation projects between Zimbabwe and China within the framework of the FOCAC has effectively boosted the economic development of Zimbabwe, Shava said, Zimbabwe firmly supports the development of the forum and stands ready to work hard to wrap up the conference so as to open a new chapter of Africa-China cooperation.